ဒစ္စနေး + မှာနှစ်စဉ်ကြေး ၅၀ သန်းရရှိခဲ့သည် Androidsis
ဒစ္စနေး + သည်ကြေး ၅၀ သန်းရရှိသည်
Rafa Rodríguez Ballesteros | | NOTICIAS, လွှ
ဒါဟာ၏ Premiere အလွန်မှန်သည် ဒစ္စနေး + သည်ဥရောပ၌မျှော်လင့်ချက်များစွာရရှိခဲ့သည်။ အ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာ၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အရည်အသွေး ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်၎င်း၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထံမှပစ္စည်းရှိသည် Marvel, Pixar သို့မဟုတ် National Geographic တို့လိုကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေ ကလေးငယ်များသာမကအာရုံကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီကအချို့ကဝေဖန်ခဲ့ကြသည်၊ ၎င်းသည်လက်ရှိပလက်ဖောင်းများနှင့်အပြိုင်ယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟူသောအချက်ကိုရည်ညွှန်း။ ၎င်းသည်ကလေးများအတွက်အကြောင်းအရာသာရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပြnotနာမဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
၎င်း၏စတင်ကတည်းက နို ၀ င်ဘာလတုန်းကဥရောပကိုမကြာသေးခင်ကရောက်မှ ပလက်ဖောင်းသိသိသာသာတိုးတက်မှုနှုန်းကြုံတွေ့။ ဘယ်ဒစ္စနေး + ပျော်မွေ့သူကို ဦး ဆုံးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံကိုသာကောင်းစွာပြောခဲ့သည်။ ထိုလများအတွင်းအချည်းနှီးမဟုတ်ပါ အထိ 26,5 သန်းစာရင်းသွင်းသူရောက်ရှိခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များမျှော်လင့်ထားထက်အများကြီးပို။
Disney + သည် Netflix ထက် ပို၍ မြန်သည်
၏ Premiere ကတည်းက ဒစ္စနေး + ဥရောပပိုင်နက်ထဲမှာ ကိန်းဂဏန်းများသည်တက်သွားသော်လည်းဘာမျှမပြုခဲ့ပါ။ ၏အချက်အထိ တက်ကြွသောစာရင်းသွင်းသူအရေအတွက်နှစ်ဆ။ မတ်လကုန်မှယခုအထိ ဒစ္စနေး + သည် subscription သန်း ၅၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ Netflix ရဲ့ဘဏ္flာရေးနှင့်ဝေးကွာသောနံပါတ်များ။ ဒါပေမဲ့ဒါကသန်း ၅၀ ရဖို့ဒစ္စနေးကိုအချိန်ယူခဲ့တဲ့အတွက် Netflix ၏လက်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်း ၁၆၀ နှင့်အထက်သုံးစွဲသူပေါင်းသန်း ၁၆၀ သည်အလွန်ဝေးကွာလှသည်.
Netflix နှင့် Disney + တို့ကိုသူတို့ပြိုင်ဘက်များဟုထင်မြင်။ မရနိုင်ပါ။ အကြောင်းအရာတခုကိုနောက်တစ်ခုသို့မလှည့်ဘဲသူတို့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အသက်အပိုင်းအခြားရှိပါသည် နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ငါတို့ရှိသမျှသည်အများပြည်သူများအတွက်အကြောင်းအရာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်Netflix သည်အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်သူများအတွက်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်။ ဒစ္စနေးကိုတစ်လလျှင် ၆.၉၉ ဒေါ်လာစီကျသင့်သည်။ မိသားစုများစွာသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုအားအခြားတစ်ခုအတွက်ထိခိုက်နစ်နာစေရန်ဆုံးဖြတ်ရသည်.
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် Disney + သည်အမှန်တကယ်အောင်မြင်ခဲ့သည် ထိုသို့ပြီးသားပါပဲ အချိန်တိုအတွင်းအများဆုံးတိုးပွားလာသော content platform ယင်း၏ Premiere ကတည်းက။ ကြည့်ရှုသူအများဆုံး၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေမည်ကိုကြည့်ရှုရန်စောလွန်းသေးသည်။ အရာအားလုံးသည်တစ်ခုချင်းစီ၏အကြောင်းအရာအသစ်ပြောင်းခြင်းအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသူများအဘို့အကောင်းပါတယ်သို့သော်ပထမနှစ်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်မရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဒစ္စနေး + သည်ကြေး ၅၀ သန်းရရှိသည်
ဥပမာစပိန်မှာအင်္ဂလိပ်၊ ဆူမီနဲ့ရှားရှားပါးပါးနဲ့၊ စပိန်လိုမဟုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေရှိတယ်
မထောက်ပံ့သောပစ္စည်းများတွင် Netflix ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း